အကြှနျုပျ၏ mom, မှီဝဲထားပါတယ်
Stefan Hallman ရဲ့အံ့သြဖွယ်စာအုပ်!
ငါ Stefan Hallman အားဖြင့် "ကျနော့်အမေထွက်လာပါတယ်ထားပြီး" အကြံပြုပါသည်။ ယရှေုသညျလူတဘို့အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်များစွာသောသက်သေခံချက်ဖြစ်ပါတယ်။
Stefan အများကြီးတိုက်ပွဲများနှင့်အတူအရက်သမားမှာကြီးပြင်းဘယ်လိုဖြစ်တယ်, ဖြည့်ပါ, ချေမှုန်းရေးသောအခါယရှေုသညျကယျတငျခွငျးသို့ရော "ကျွန်မမိခင်မှီဝဲလိုက်ပါတယ်" ။
ရဲ့ contents ထံမှ
အိမ်မှာဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံသည်မိခင်အိမ်ကနေသို့ပွေးတွေနဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်။ သူမသည်သောက်ဆင်းမြို့ကိုဘတ်စ်ကားကိုယူ။ ဒါဟာကျနော်တို့ကဆိုသည်အတိုင်းဖြစ်လေ၏။ "အမေကပ်ထားပါတယ်"
ကျွန်မအဲဒီစကားမုန်း၏။ အဖေကအိမ်မှာလာသောအခါအသူမထောင့် nersparkad ၌အိပ်ခြင်းနှင့်ချိုးဖဲ့သောအခါငါ ... ကအဓိပ်ပာယျသွေးထွက်သံယိုမြင်ကွင်းများ, နှင့်အမိ၏အပူတပြင်းအော်ဟစ်၏မှတ်ဉာဏ်သိသည်။
အဖေကအိမ်မှာသို့ရောက်လာသည်နှင့်ငါ့ mom, အနည်းဆုံးအရက်အနံ့ကိုခံ ယူ. မှန်လျှင်, သူ berserk သွားလေ၏။
ငါအိမ်ပြန်ကျောင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာအရာအားလုံး start လိမ့်မယ်။ ထိုအခါငါတစ်ဘီယာကိုယူငါ့အမေအကြောင်းကိုငါ့လက်ျာဘက်ခံစားရတယ်။ ငါ knarkhund ကဲ့သို့ရှိကအဖြစ်အထိခိုက်မခံခဲ့သည်။ သူမသာအနည်းငယ် sips ဝတ်ဆင်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟာပြုလေ၏။
ငါငါ့အမေ, ငါ့သုံးခုညီကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့ရတယ်ခံစားရတယ်, အိမ်ပြန်ဝံ့ကြဘူး။
အခုတော့မာရ်နတ်ရှုခင်းစတင်ခဲ့သည်။ အသွေးသည်သူမတစ်ဦးလေယာဉ်ပျက်ကျမှုနှင့်အတူကြမ်းပြင်ထံသို့ ဝင်. သူသူမ၏ကန်စတင်ခဲ့ပြီး, သူမ၏နှာခေါင်းကနေ spurted အဖြစ်သူပိုင်ခွင့်မျက်နှာ၌တံခါးပိတ်လက်သီးနှင့်အတူသူမ၏အဘို့အခုတ်တီးနိုင်ဘူး။
ဒါဟာအခြားအရာတို့တွင်ခရစ်ယာန်သတင်းစာအဆိုပါနေအိမ်၏အဆွေခင်ပွန်းအတွက် serialized ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါစာအုပ်လည်း evangelisationsbok အဖြစ်သင့်လျော်သည်။